China FA1012-NP / C / T _ 10.1 padiki capacitive kubata montior Mugadziri uye mutengesi | Lilliput
Nhepfenyuro Director Monitor
12G-SDI director mutariri
4K director mutariri
Rack Mount tarisisa
Kuchengetedza Monitor 7-16 ″
Inobata Inobata Bata Monitor 7-13.3 ″
Simbi yekugara Monitor 7-15 ″
Resistive Kubata Monitor 7-15 ″
Inobata Inobata Monitor
FA1012-NP / C / T _ 10.1 padiki capacitive kubata montior
FA1210-NP / C / T ndeye 10.1 padiki capacitive mizhinji yekubata yekutarisa. Kana iwe uchida isiri-yekubata basa, FA1210-NP / C inogona kusarudzwa. Iine mwenje we LED we1024 × 600 resolution yemuno uye 16: 9 factor ratio, inogona kutsigira zvigadzirwa zvevhidhiyo kusvika 1920 × 1080 kuburikidza neHDMI. Haingotsigire zvinowedzerwa neHDMI chete, asi inotsigira VGA, DVI, AV inopinza chiratidzo chiratidzo. Kuwedzerwa kwechiratidziro chematte kunoreva kuti ese mavara anomiririrwa zvakanaka, uye anosiya chisina kuratidzwa pachiratidziri. Kunyangwe uine mudziyo weAV wauri kushandisa, unoshanda needu FA1012, ingave iri komputa, Bluray mutambi, CCTV kamera uye DLSR kamera. VESA bracket inogona kutsigirwa.
Muenzaniso: FA1012-NP / C / T.
Bata pani: 10 poindi capacitive
Ratidza: 10.1 inch, 1024 × 600, 250nit
Nzvimbo: HDMI, VGA, inoumbwa
Tumira neindaneti kwatiri Dhawunirodha sePDF Mushandisi gwaro
Iyo Lilliput FA1012-NP / C / T ndeye 10.1 inch 16: 9 LED Inogonesa inobata skrini yekutarisa ine HDMI, DVI, VGA uye vhidhiyo-mukati.
Ongorora: FA1012-NP / C / T ine bata basa.
10.1 padiki tarisisa ine yakafara screen factor ratio
FA1012-NP / C / T ndiyo yazvino kudzokorora kune Lilliput inotengesa zvakanyanya 10.1 - tarisisa. Iyo 16: 9 yakafara screen screen ratio inoita kuti FA1012 ive yakanaka kune akasiyana maAV application - unogona kuwana iyo FA1012 mumakamuri enhepfenyuro eTV, odhiyo inoonekwa yekuisirwa, pamwe nekuve yekutarisa yekutarisa pamwe nehunyanzvi kamera vashandi.
Kunaka kwemavara tsananguro
FA1012-NP / C / T inozvirumbidza iyo yakapfuma, yakajeka uye inopinza pikicha yechero Lilliput yekutenda nekuda kweiyo yepamusoro musiyano chiyero uye LED backlight. Kuwedzerwa kwechiratidziro chematte kunoreva kuti ese mavara anomiririrwa zvakanaka, uye anosiya chisina kuratidza pachiratidziri. Zvakare, tekinoroji yeLED inounza mabhenefiti makuru; low power consumption, instant-on back light, uye inopenya inopfuura makore nemakore ekushandisa.
Natively yakakwirira resolution pani
Chaizvoizvo 1024 × 600 pixels, FA1012 inogona kutsigira vhidhiyo yekupinda kusvika 1920 × 1080 kuburikidza neHDMI. Iyo inotsigira 1080p uye 1080i zvemukati, ichiita kuti ienderane neakawanda HDMI uye HD sosi.
Bata Screen Izvozvi Ne Inogoneka Kubata
FA1012-NP / C / T ichangobva kukwidziridzwa kushanda ichishandisa capacitive touchscreen, yakagadzirira Windows 8 uye iyo nyowani UI (yaimbove Metro), uye inoenderana neWindows 7. Kupa kubata kwekubata kwakafanana neiyo iPad uye mamwe mahwendefa epahwendefa, iri shamwari yakanaka kune yazvino komputa Hardware.
Yakazara huwandu hweAV zvigadzirwa
Vatengi havafanirwe kunetseka nezvekuti yavo vhidhiyo fomati inotsigirwa, iyo FA1012 ine HDMI / DVI, VGA uye zvikamu zvinowaniswa. Hazvina mhosva kuti vatengi vedu vari kushandisa chii, ichashanda neFA1012, ingave iri komputa, Bluray player, CCTV kamera, DLSR kamera - vatengi vanogona kuva nechokwadi kuti mudziyo wavo uchabatana needu kuona!
Sarudzo mbiri dzakasiyana dzekumisikidza
Pane nzira mbiri dzakasiyana dzekumisikidza FA1012. Iyo yakavakirwa-mukati desktop inomira inopa yakasimba rutsigiro rweiyo tarisiro kana yagadzwa padesktop.
Iko kune zvakare VESA 75 gomo kana desktop desktop yakadzvanywa, ichipa vatengi sarudzo dzisingagumi yekumisikidza.
Previous: 779GL-70NP / C / T _ 7 padiki kupenya kwakakwira capacitive kubata montior
Next: FA1014-NP / C / T _ 10.1 padiki HD capacitive kubata montior
Bata pani 10 points capacitive
Saizi 10.1 "
Kugadziriswa 1024 x 600
Kupenya 250cd / m²
Kusiyanisa 500: 1
Kuona Angle 140 ° / 110 ° (H / V)
Inotsigirwa Mune Mafomati
Sravana Sameeralu Serial 4th Audio Out
Nzeve Jack 3.5mm - 2ch 48kHz 24-chidimbu
Simba rekushandisa ≤9W
Uchishandisa Tembiricha 0 ℃ ~ 50 ℃
Kuchengetedza Tembiricha -20 ℃ ~ 60 ℃
Divi (LWD) 259 × 170 × 62 mm (ine bracket)
capacitive touch kuratidza
capacitive kubata montior
capacitive inobata skrini
FA1014-NP / C / T _ 10.1 padiki HD capacitive ikabatwa M ...
FA1016 / C / T _ 10.1 padiki izere HD capacitive kubata ...
FA1210 / C / T _ 12.1 padiki maindasitiri capacitive kune ...
Kwete. 26 Fu Qi North Road, Lan Tian Economic Development Zone, Zhang Zhou, Fu Jian, 363005, China
Usb Powered Monitor , Sdi Cctv Monitor , Professional dzeShona Monitor , Cctv Chinovhara , Lilliput Monitor , Lilliput ,